कोरोना सङ्क्रमणबाट बुटवलमा थप दुईजनाको मृत्यु - Yessamachar
कोरोना सङ्क्रमणबाट बुटवलमा थप दुईजनाको मृत्यु
बुटवल । बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत दुईजना कोरोना सङ्क्रमितको आज मृत्यु भएको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–२ का ५९ वर्षीय पुरुष र गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका–१ का ६६ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमले जानकारी दिए ।
सङ्क्रमित दुबै जनामा उच्च ज्वरो, उच्च रक्तचाप र श्वासप्रस्वाससम्बन्धी समस्या रहेको अस्पतालले जनाएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाका पुरुषमा यही २ गते कोरोना पुष्टि भएको थियो भने गुल्मीका पुरुषमा कात्तिक २८ गते कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । रासस
Previous articleसेनाबाट सशस्त्र प्रहरी प्रवेश गरेका ५ डीआईजी जागिर लम्ब्याउने प्रयासमा
Next articleयसवर्षको अमेरिकी चुनाव खर्च ऐतिहासिक ! ट्रम्पको ‘रातो–क्याप’मा मात्र ८० लाख डलर लगानी